Hindiya: Malaayin Qof Oo Ka Qeyb Galaya Munaasabad Diimeed U Gaar Ah – somalilandtoday.com
Hindiya: Malaayin Qof Oo Ka Qeyb Galaya Munaasabad Diimeed U Gaar Ah
(SLT-Hindiya)-Malaayiin qof oo ku sugan magaalada Allahabad ee waqooyiga dalka Hindiya ayaa isu diyaarinaya inay ku qubaystaan biyaha barakaysan, taas oo qeyb ka ah kulanka diimeed ee ugu ballaaran caalamka ee Kumbh Mela.
Saraakiisha ayaa waxay filayaan in 120 milyan oo qof ay kasoo qayb galaan debaldeggan socon doona 49 maalmood.
Waxaa lagu tilmaama barkulanka ugu weyn ee dunida waxaan laga arki karaa hawada sare.
Dadka haysta diinta Hinduuga ayaa amminsan hadii ay ku qubeystaan halka ay webiyasha ku kulmaan oo loo yaqaano Sangam in dembiyadooda la dhaafi doono
Debaaldeggii ugu dambeeyay ee la qabtay sanadkii 2013ka ayaa markii ugu horeysay waxaa loo ogolaaday in dumarka ay webiyada ku qabeystaan iyadoo sanadkana tirada dumarka kasoo qaybgalaya ay sare u sii kacday.
Waxaa kulankan sidoo kale kasoo qayb geli doona in kabadan hal miyan oo qof oo xujeey ah kuwaas oo dalka dibediisa ka imaanaya sida ay qabanqaabiyaashu BBC-da u sheegan.
Ninkan iyo dadka kale ee qabanqaabinayay kulanka ayaa waxa ay xafladda diyaarinayeen muddo ka badan sanad, isu soo baxanna waxa uu u dhigmaa sida Xajka Muslimiinta ee sanadlaha ah ee lagu qabto goobaha barakaysan ee Islaamka ee Sucuudi Carabiya.
Dadka kullankan ka qeyb galaya ayaa waxaa loo diyaariyay inay jiiftaan 42kun oo teendhoyin ah oo lagu dhisay dhul gaaraya ilaa 32 kiloomitar, waxaana la dhisay waddooyin cusub oo ka kooban boqolaal kiloomitar. Sidoo kale waxaa la dhisay isbitaalo iyo bangiyo ku meel gaar ah.
Debaaldeggan waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaya kooxaha dab-demiska waxaana la dhisay 120 kun oo musqul sii loo haqabtiro baahiyaha xujeeyda.
Waxaa magaalada Allahabad ka howlgalaya boqalaal tareen oo cusub halka 30kun oo boolis ah iyo ciidammada sida gaarka u tababaran oo ammniga sugaya.
Waxaa kale oo la dhisay goob ku shaqeynayso nidaamka teknoolajiyadda casriga ah halkaas oo lagu soo hagaajini karo ciddi lunto, sidoo kalena lagusoo wargelini karo ciddi la waayo sii maclumaadka loola wadaago goobaha kale iyo sidoo kale baraha bulshada.